Burmese people has spoken out. Mass Boycott Nationwide | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » Burmese people has spoken out. Mass Boycott Nationwide
Burmese people has spoken out. Mass Boycott Nationwide
Posted by timothy on Nov 6, 2010 in 2010/2012/2015 Election, Myanma News, News, Opinions & Discussion, Politics, Issues, World News |0comments
နက် ဖန်ခါ ဒီသီတင်းကကမ္ဘာကိုတုန်လှုပ်သွားစေရမယ်။ သန်းရွှေအခက်၊ဗမာ့အချက်တဲ့။ နှစ်ပေါင်းများစွာစစ်ဘိနက်အောက်ပြားပြားဝပ်အောင်ခါးဆီးပြီးခံခဲ့ရတာတွေ၊ ဒီနေ့မှာကျုပ်တို့အလှည့်ပေါ့လေ။ အလှဲ့ကြတော့မနွဲ့စတမ်းပေါ့သန်းရွှေ။
နက်ဖန်ခါရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာကျုပ်တို့တခြားဟာကြိုက်တာလုပ်မယ်။ ၂ခု၊ အဲဒီ၂ခုကိုကျုပ်တို့လုံးဝ မလုပ်ဘူး။
၁) ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ရွေးကောက်ပွဲအတုကိုပေးတဲ့မဲ တစ်ခုမှမရှိဘူး။
၂)ရဲ့ ၇ည်ရွယ်ချက်က မဲရုံတွေမှာ လူမရှိ၊ ဗလာမဲရုံ။
ဒါကျုပ်တို့တဥိးချင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒ၊ ဘယ်သူတဦးတယောက်မှလှည့်ပါတ်ချိမ်းချောက်ပြီးလုပ်ခိုင်းလို့မရတဲို့ယ်ပိုင်စိတ်ဆန္ဒ။ သန်းရွှေဆိုတဲ့ငမိုက်သားနဲ့ဘာမှမဆိုင်၊ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဘဲ။
ဟေ့ကောင်သန်းရွှေ၊ မင်းကငါတို့ကိုအတင်းအဓမ္မမဲထဲ့ခိုင်းဘို့လာစမ်းကြည့်စမ်းပါ။ အဲဒီနေ့မှာငါတို့အားလုံးဟာနင့်ကျွန်မဟုန်တော့ဘူး။
ဖမ်းရဲ၊ရိုက်ရဲရင်လုပ်လိုက်လေ၊ ဒါငါတို့ရဲ့နေ့ဘဲ။ နင်ဘဲဖမ်းနိုင်မလား၊ငါတို့ကဘဲအဖမ်းခံနိုင်မလား၊ ကြည့်သေးတာပေါ့။ နင့်မှာငါတို့ဖါသာမဲမပေးချင်လို့ကိုယ့်ဖါသာကိုယ့်အခွင့်အရေးနဲ့ဘာမှနင့်ကိုမလုပ်ဘဲနေတဲ့ သန်း၂၀၊ အဲဒီသန်း၂၀ကျော်ကိုဖမ်းချုပ်ဘို့၊ သို့လော သို့လောနဲ့နင်ဘာတတ်နိုင်တာရှိလဲ။
ကမ္ဘာ့အင်အားအကြီးဆုံးသမ္မတ္မ Mr အိုဘားမားလဲ အာရှတခွင်လှည့်လယ်ရင်းနင့်ကိုစောင့်ကြည့်ဘို့ရောက်နေပြီ။ တုန်နေပြီပေါ့။
ဒီ့ထက်နင်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကတော့ ကမ္ဘာမှာအင်အားတကာ့အင်အားအရာမှာဘယ်သူမှမယှဉ်နိုင်တဲ့ လူထုအင်အား၊ နင်တသက်လုံးစိတ်ကြိုက်ဖိနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လူထုအင်အား၊ နင့်မတောက်တခေါက်မီးကျိုးမောင်းပျက်၎သိန်းလောက်မရှိတရှိစစ်ခွေးတွေဘယ်လိုမှမယှဉ်နိူင်တဲ့ သန်း၅၀ သောလူထုအင်အား၊ လူယဉ်ကျေးများကိုးကွယ်လေးစားကြတဲ့လူထုအင်အား၊နင်ကနလဗိန်းတုံးဖြစ်လို့နားမလည်နိုင်တဲ့လူထုအင်အား၊ နင့်ံပထွေး တရုပ်နဲ့ ရုရှားတို့ကတောင်လေးစားအသိအမှတ်ပြုရတဲ့လူထုအင်အား၊ဒီလူထုကြီးကနက်ဖြန်ခါမှာနင့်ကိုပြစ်ဒါဏ်ခတ်ခါတ်လိမ္မယ်။
ဒို့ရဲ့အနီးကပ်ဆုံးဘုံရန်သူ ဖက်ဆစ်သန်းရွှေတို့တစုကို လူထုအား၊လူထုအင်အားနဲ့သပိတ်တိုက်စစ်ဆင်ပြီးမိစ္ဆာသန်းရွှေကိုမောင်းထုတ်ဘို့အဆင်သင့်ဘဲမဟုတ်လား။